Amos 1 AKCB - Amos 1 NTLR
1Amos, Tekoa nguanhwɛfo no mu baako nsɛm ni. Onyaa saa anisoadehu yi a ɛfa Israel ho mfe abien ansa na asase wosowee, bere a Usia di hene wɔ Yuda na Yoas babarima Yeroboam nso di hene wɔ Israel no.
“Awurade bobɔ mu fi Sion bepɔw so
na ɔde aprannaa nnyigyei nso fi Yerusalem;
nguanhwɛfo mmoa adidibea rehyew
na Karmel atifi nso kisa.”
Atemmu A Ɛfa Amanamanmufo Ahorow Ho
3Nea Awurade se ni:
ɛno nti, merennan mʼabufuw.
Efisɛ ɔde awiporowbea ade a ɛwɔ dade se
4Mede ogya bɛto Hasael fi
na ahyew Ben-Hadad aban no.
5Mebubu Damasko apon,
na mɛsɛe ɔhene a ɔwɔ Awen bon no mu no
ne nea okura ahempema wɔ Bet Eden no.
Na Aramfo bɛkɔ nnommum mu wɔ Kir,”
6Nea Awurade se ni:
ɛno nti, merennan mʼabufuw no.
na ɔtɔn wɔn maa Edomfo.
7Mede ogya bɛto Gasa afasu mu,
na ahyew nʼaban no.
8Mɛsɛe Asdod hene no
ne nea okura ahempema wɔ Askelon no.
Mɛdan me nsa atia Ekron,
kosi sɛ Filistini a otwa to no bewu,”
sɛnea Asafo Awurade se ni.
9Nea Awurade se ni:
Ɔfaa ɔmanmu no nnommum
na ɔtɔn wɔn maa Edomfo,
10Mede ogya bɛto Tiro afasu no mu,
na ahyew nʼaban.”
11Nea Awurade se ni:
Ɔde afoa taataa ne nua,
a wannya ayamhyehye biara.
Efisɛ ne bo kɔɔ so fuwii,
na obiara antumi annwudwo nʼabufuw no ano.
na ahyew Bosra aban.”
13Sɛnea Awurade se ni:
Ɔde afoa paapaee Gilead apemfo yafunu mu
de trɛw nʼahye mu.
14Mede ogya bɛto Raba afasu mu
na ahyew nʼaban
wɔ ɔko da mu nteɛteɛmu
ne ahum da mfɛtɛ mu.
15Na ne hene ne mmapɔmma
bɛbɔ mu akɔ nnommum mu,”
AKCB : Amos 1
15Regele lor15 Sau: Milkom (Moleh, zeul suprem al amoniților). Ebr.: malkam va merge în exil